प्याजमा जताततै कालोबजारी: प्याज बोकेर आएका ट्रक नै हराए…. – Articles Nepal
प्याजमा जताततै कालोबजारी: प्याज बोकेर आएका ट्रक नै हराए….
३० भदौ काठमाडौँ : भारत सरकारले प्याज निर्यातमा रोक लगाएसँगै यसको प्रत्यक्ष असर नेपाली बजारमा परेको छ । भारतले नेपालमा प्याज निर्यात गर्न रोक लगाएकै भोलिपल्ट नेपाली बजारमा प्रतिकेजी प्याजको मूल्य अघिल्लो दिनभन्दा थोकमै ४० रुपियाँसम्म बढेको छ । खुद्रा बजारमा त प्याजको अभाव नै हुन थालेको छ । खुद्रा व्यापारीले सोमबार प्रतिकेजी ६५ रुपियाँमा बिक्री गरेको प्याज मङ्गलबार १२० देखि १५० रुपियाँसम्म बिक्री गरेका छन् ।
Previous Post: नारायणगढ मुग्लिन सडक अ’वरुद्द
Next Post: झन् वि’वादित बन्दै कंगना: मुम्बईलाई कश्मिरजस्तो भनेपछि अभिनेत्री उर्मिला मातोंडकरले दिईन् चे’तावनी